Last nohavaozina: Mey. 22 2019 | 2 min namaky
Isika rehetra dia mahafantatra fa tena tsara dia afaka mahatsapa firaisana Fantatrao ve anefa fa raha ny marina firaisana salama ho anareo?
Firaisana ara-nofo dia manampy foana ny hery fiarovana miasa araka ny tokony ho. Ny olona manana firaisana ara-nofo, raha ny marina matetika manana ny hery fiarovana ambaratonga ambony izay miaro ny vatana amin'ny mikraoba, virosy, ary ny hafa intruders. Mazava ho azy, izany ihany koa ny fahazoan-dalana mankany fa mijanona ho mavitrika, mihinana salama, ary ampy torimaso mba ho azo antoka fa mijanona ny hery fiarovana sambatra.
Firaisana ara-nofo boosts libido. Manana firaisana ara-nofo dia tsy ho tsara kokoa fa ho fanatsarana ny libido. Ho an'ny vehivavy, manana firaisana ara-nofo mitombo fivaviana lubrication, ra, ary elasticity, manao firaisana ara-nofo rehetra maivamaivana nandritry ny fahariana no hianteheran'ny fanirianao lalina kokoa.
Firaisana ara-nofo mampihena ny fankamamiantsika ny tosidra. Misy fikarohana izay toa manondro fa misy ifandraisany ny firaisana ara-nofo sy ny ambany tosidra. Firaisana ara-nofo ihany koa ny mampihena ny fankamamiantsika ny aretim-po mety. Ankoatra ny maha manaporofo tsara ny hitandrina ny fonao ny tahan'ny, firaisana ara-nofo koa dia manampy foana ny haavon'ny estrogen sy ny testosterone amin'ny mizana.
Firaisana ara-nofo toy ny fanatanjahan-tena zava-dehibe. Na dia tsy mahasolo ny mahazatra cardio workout, dia tena manampy. Matetika, firaisana ara-nofo dimy mirehitra kaloria isa-minitra, ankoatra ny bumping ny fonao sy ny tahan'ny fampiasana hozatra samihafa.
Firaisana ara-nofo dia afaka mampihena fanaintainana. Na dia miady ny migraine na harary sy ny fanaintainana, raha tokony ho grabbing aspirine, hanandrana ny levitra. Nandritra ny levitra, Navoaka ny hormonina izay manampy mitaiza ny fanaintainana fandeferana. Na dia tsy misy levitra rehefa tairina afaka manampy mampihena ny fanaintainana.
Firaisana ara-nofo ny olona dia mety hampidina ny vintana amin'ny prostate homamiadana. Fandinihana vao haingana nataon'ny Gazetin'ny Fikambanana Amerikanina Momba ny Fitsaboana dia milaza fa ny olona izay ejaculated matetika (farafaharatsiny 21 fotoana isam-bolana) tsy dia azo inoana fa mba prostate homamiadana.
Manatsara ny firaisana ara-nofo matory. Ny olona maro mba hatory Vao firaisana ara-nofo, indrindra no misy levitra anjara. Taorian'ny levitra, hormone prolactin Navoaka izay mitarika ny fihetseham-po sy ny fialam-boly ny tory.
Farany, firaisana ara-nofo dia manampy mba hanamaivanana ny adin-tsaina. Ny hoe akaiky, ara-nofo sy pihetseham-po, ny mpiara-miasa dia afaka hampitony, fahoriana, ary ambany ny fanahiana. Mampihetsi-po sy namihina afaka hanafaka ny voajanahary “mahatsapa-tsara hormonina” firaisana ara-nofo raha arousal amps ambony ny fahafinaretana sy ny rafitra valisoa amin'ny famotsorana ny atidoha simika. Firaisana ara-nofo sy ny ara-batana sy ara-pihetsehampo koa akaiky hampitombo-tena ho tsinontsinona sy ny fahasambarana.
Araka ny hitanao izao, firaisana ara-nofo dia tsy hitondra any amin'ny fiainana sambatra, fa ny olona salama koa.